Iran & Qadar iyo Jaahwareerka Sacuudiga iyo Xulufadiisa GCC – Radio Daljir
May 29, 2017 6:25 g 0
Bloomberg Politics – Sida ay qortay jariirada Bloomberg politics, xafiiskeeda wadamada Khaliijka ee loo yaqaan “Gulf Cooperation Council (GCC)” ayada oo xiganaysa wasiir ka tirsan Dawladda Isutagga Imaaraadka carabta, waxaa jira khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay boqortooyooyinka Khaliijka, oo la dhihi karo waa walaac mug weyn, salkana ku haya muran u dhexeeya xulafada Sacuudigu huggaamiyo iyo dawladda Qadar oo ayana gacanta u haadinaysa Iran.
Anwar Gargash, Wasiiru Dawlaha Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay farriin oranaysa “muranka jiraa wuxuu abuuray walaac, wuxuuna keeni karaa khatar aan la dhalaysan karin.” Asaga oo qoraalkiisa kooban sii watana waxa uu qoray, “in dhibka la yareeyo waxay u baahantahay isbaddal dhanka akhlaaqda iyo waliba in la abuuro isfaham buuxa si la isugu soo dhawaado.”
Booqadashii Trump ee Sacuudiga ayaa khalkal galisay wadamada Khaliijka, taas oo keentay in wargeyska dawladda Qadar uu qoro qoraal ka soo horjeeda fikirka Trump iyo Boqor Salmaan ee ahaa in Iran la cidleeyo, cunaqabatayntiina lagu soo celiyo. Qoraalka ayaa ka horyimid qorayna in aysan wax faa’ido ahi ku jirin in marna Trump uu Iran afka ka weeraro mar kalena Boqor Salmaan.
Mas’uul mar danbe u hadlay dawladda Qadar ayaa markii danbe beeniyey qoraalka, waana laga masaxay bogga wargeyska.
Sacuudiga oo ku jabay laba aag oo dagaal, waa agga Siiriya iyo kan Yemen, dhaqaalo xumo baaxad weynna ay soo wajahday, ayaa aad uga xanaaqay qoraalka, sababayna in jaraa’idada Sacuudiga oo dhan ay qaadaan dagaal ka dhan ah dawladda Qadar. Qoraalada jaraa’idada Sacuudiga waxaa ka mid ahaa “Qadar ballan ma leh, ballana ma fuliso.” Joornaalka Al Eqtisadiyah ayaa asna qoray “Qadar: Dhaqaale dhumay oo lagu khasaaray dheh iyo musuqmaasuq maaliyadeed oo baahsan!”
Ciilka iyo carada Sacuudigu u qaaday Qadar intaas kuma ekaan e wuxuu xayndaab mamnuuc saaray mareegta Dawladda Qadar leedahay ee Al Jazeera Television.
Madaxweyne Rooxaani iyo Shiikh Al Thaani
Carada Sacuudiga waxay cirka isku sii shareertay kaddib kulan dhanka taleefoonka ah oo dhexmaray huggaamiyaha Qadar, Shiikh Tamim bin Xamad Al Thaani, iyo Madaxweynaha mar kale la doortay ee Iran, Xasan Rooxaani. Rooxaani ayaa yiri dalkiisu waa u diyaar in wadahadalo xaaladda lagu xasilinayo la bilaabo.
“Caalamka Islaamku oo farqi iyo kala shaki uu hareereeyey, waa muhiim in ay nabad iyo walaaltinimo ka shaqeeyaan, taasna si loo gaaro, loona helo heshiis dhab ah annagu diyaar ayaan nahay,” buu yiri Madaxweyne Xasan Rooxaani.
Saas oo ay tahay, hadana saacado kabacdi waxaa hadlay huggaamiyaha sare ee Iran, Ayatollah Cali Khameney, wuxuuna yiri, “Sacuudiga jab weyn oo siyaasadeed baa suganaya, jabkaasna waxaa keenay siyaasaddiisa ismaqiiqa ee Yemen.” Ayatollah oo hadalkiisa si caro leh u sii wata ayaa ku daray, “muuqaalka Sacuudigu yuusan farriin beenaad idin farin, waa xukuumad khiyaali ah, waa mid aan cago badan ku taagnayn oo sii wiiqmaysa, hana filan waayina haddii ay mar dhow albaabka ka sii baxdo. I rumaysta taas innaba wax su’aal ahi kama taagna.”
Dawladda Qadar oo sanadahaan danbe cayaarta siyaasado kala duwan, badanaana tartan kula jirta dawlado la yiraahdo way ka tun weyn yihiin Qadar ayaa maanta shaacisay in ay heshiis dhexdhigi doonto Dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab.
Dhismaha ka socda Qadar iyo koobka kubadda cagta
Ivanka Trump & safarkii Sacuudiga
Siyaasadda & Dhaqaalaha 287 Wararka 10071